တောင်ငူသား: September 2008
တန်းမဝင်လို့ လမ်းတင် လွှတ်ရတယ်
တောင်ငူသား ဘလော့ဂ်ရေးလာတာ ၇ လထဲ ရောက်တော့မယ်။ ရေးတဲ့ ပို့စ်အရေအတွက်က ၅၀ကို မကျော်နိုင်ဘူး။ ရေးထားတာတွေကတော့ ရှိပါတယ်။ လက်စမသတ်သေးတာရယ်၊ စသာစထားပြီး ဆက်မရေးဖြစ်သေးတာရယ်ကြောင့် ပို့စ်အဖြစ်နဲ့ စာမျက်နှာပေါ် ရောက်မလာဘူး။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာတင်ထားပြီးမှ ဘာခံစားမှုမှ မပေးနိုင်တဲ့ပို့စ်တွေ၊ တော်တော်လေး ပေါတောတောဖြစ်နေတဲ့ ပို့စ်တွေဆိုရင် ပြန်ဖျက်ပစ်ပါတယ်။ ပို့စ်တစ်ခုကို ရေးနေတုန်းလည်း အမျိုးမျိုးပြင်ပါတယ်။ တင်ပြီးသွားတဲ့အခါလည်း ပြန်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး စာမချောဘူး၊ ရေးထားတာ အစီစဉ်မကျဘူး ထင်ရင်လည်း ပြန်ပြင်လို့ကို မပြီးနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အကျိုးဆက်က ပို့စ်အရေအတွက်တက်ဖို့ နှောင့်နှေးပါတော့တယ်။ စိတ်တိုင်းကျ ရှင်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါ နောက်ဆုံးတင်ကျန်ရစ်တဲ့ ပို့စ်တွေဟာ ဝင်ဖတ်သူတွေကို ပေးဖတ်ဝံ့လောက်တဲ့ အနေအထားတွေသာ ဖြစ်ကျန်ရစ်ပါတယ်။ တောင်ငူသားရဲ့ ပို့စ်တွေဟာ ကွန်မန့်သိပ်မရပါဘူး။ ဒီနေ့ထိ တင်ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်တွေမှာ တောင်ငူသား ပြန်ကြားတဲ့ ကွန်မန့်ကို ထည့်မရေတွက်ဘဲ ၁၀ခုနဲ့ အထက် ရတာဆိုလို့ ပို့စ် ၃ ခုပဲရှိပါတယ်။
ဝမ်းနဲ့ကျွေးတဲ့ဖေဖေ (၁၄ ခု)၊
Gtalk နဲ့ ချစ်သက်သေမထူကြစေလို (၁၀ခု) နဲ့
Comment (ကွန်မန့်) ဘာလဲ ? ဘယ်လဲ? (၁၄ခု) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ငူသားရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်တွေဟာ စာများပါတယ်။ တွေ့ကြုံ ခံစားဖူးတာတွေကို ဖတ်လို့အဆင်ပြေအောင်သာ အများဆုံးရေးဖြစ်တာမို့ တောင်ငူသားရဲ့စာတွေဟာ လေးနေတတ်ပါတယ်။ ရေးနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအတွင်းမှာတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ ပို့စ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အကြောင်းအရာ ရိုးအီမသွားအောင် ကြိုးစားရေးပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ကျောင်းက အမှတ်တရတွေ ဖတ်ချင်ကြတယ် သတိရချင်ကြတယ်။ တောင်ငူက မိတ်ဆွေတွေက တောင်ငူအကြောင်းလေးတွေ သိချင်ကြတယ်။ လွမ်းချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ အဲဒီခေါင်းစဉ်တွေ အောက်မှာချည်း ရေးနေရင်လည်း တောင်ငူစာမျက်နှာဟာ ဘောင်သိပ်ကျဉ်းသွားလိမ့်မယ်။ အားလုံးလည်းဖတ်လို့ရအောင် တောင်ငူအကြောင်းဆိုလည်း ခပ်ရွှင်ရွှင်လေးရေး၊ ကျောင်းက အကြောင်းဆိုလည်း ခပ်သောသောလေး ရေးရပါတယ်။ စာရေးဆရာမဟုတ်ဘဲ စာရေးဝါသနာပါလို့သာ ရေးရတာမို့ ပညာရှင်လက်ရာတော့ ဘယ်လိုမှ မမီပါဘူး။
Comment(ကွန်မန့်) ဘာလဲ ?ဘယ်လဲ? ပို့စ်က “ကွန်မန့်ကို ဘလော့ဂ်အတွက် ပေးသော စာမူခ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးကို နှစ်သက် လက်ခံကြသူ အများအပြား ရှိလာတာကို တွေ့ရလို့ တောင်ငူသား အတော်လေးကျေနပ်နေတာပါ။ ပို့စ်ရေးတဲ့နေရာမှာ ကွန်မန့်အများအပြားရအောင် မဖန်တီးနိုင်ပေမယ့် မြန်မာဘလော့ဂ်အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ “ကွန်မန့်၊ စာမူခ နဲ့ တောင်ငူသား” အဲဒီသုံးခုကို ယှဉ်တွဲမှတ်မိကြရင်ဖြင့် တောင်ငူဘလော့ဂ်ကို ပျိုးထောင်ရကျိုးနပ်ပါပြီ။ (ယိုင်ယိုင်ပဲကျန်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အားတင်းတာပါ။ ခွင့်လွှတ်ကြပါ)။ စာမူခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရောက်လာဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်း အများအပြားရှိလာပါတယ်။ (ဥပမာ - စာမူခအကြောင်းသိချင်ရင် တောင်ငူသားဆီသွား ဆိုပြီး ကိုရွာသားလေး က ညွှန်လို့ ကိုရုပ်ဆိုး ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။)
ကွန်မန့်တစ်ခုသည် ပို့စ်ရေးတဲ့သူရဲ့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကို ချီးမြှင့်ခြင်းပါ။ ဒါပေမယ့်ဗျာ တောင်ငူသား အားကြီးစိတ်ညစ်တယ်။ တောင်ငူသား ရေးတယ်။ ဘယ်လိုရေးရေး အဟေးဟေး ပဲ။ အရင်က စီပုံးတွေမှာ လိုက်လိုက်ကြော်ငြာတယ်။ ပေါ်တင်အော်တယ်။ နောက်တော့ ရှက်လာလို့ ကြော်ငြာအစီအစဉ်ကို ဖျက်လိုက်တယ်။ နှစ်သက်လို့ ကွန်မန့်ပေးရင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ပို့စ်လေးကို လင့်ခ်ထည့်ပြီး ရေးပါတယ်။ ကိုဇနိ ကျေးဇူးကြောင့် လုပ်တတ်သွားတာပါ။ ရုပ်မြင်တွေမှာ လွှင့်တဲ့ကြော်ငြာတွေနဲ့ ယှဉ်ပြောရရင်တော့ အရင်ကကြော်ငြာတဲ့ပုံစံက သီချင်းဖွင့်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ လှုပ်ခါပြတာမျိုးနဲ့တူပြီး၊ အခုကြော်ငြာပုံစံကတော့ ဇာတ်လမ်းလေးဆင်ပြီး ယုတ္တိတန်အောင် ကြော်ငြာတာမျိုးပေါ့ဗျာ။
မြန်မာဘလော့ဂ်ရေးသူတွေ များလာတာနဲ့အမျှ ရေးတဲ့အကြောင်းအရာ အမျိုးအစားတွေလည်း စုံလင်လှပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ တောင်ငူသားရေးတဲ့ပုံစံက ဘာနဲ့တူနေလဲလို့ဆိုရရင်။ တောင်ငူသားပီပီ တောင်ငူရာဇဝင်လေးနွယ်ပြီး ပြောမှ။ ရှေ့တန်းတစ်နေရာမှာ ရောက်နေတဲ့ ရတုဘုရင် နတ်သျှင်နောင်ကနေ ရာဇဓါတုကလျာဆီကို ကျေးစေတမန်နဲ့ ချစ်သဝဏ်လွှာဆက်ဖို့ ရေးထားပြီးခါမှ တန်းမဝင်လို့ လမ်းတင် လွှတ်ပစ်ထားတဲ့ ပေရွက်တွေလိုပါပဲ။ ရေးတုန်းကတော့ ကျော်ဇောလင်းရဲ့ အတွေးပုံရိပ်အတိုင်း ဦးတင်ယုလို သရုပ်ပြအမွှန်းတင်ပြီး စင်ရော်မောင်မောင်လို ခံစားတင်ပြလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် မောင်မျိုးမင်းလို ရင်တွင်းလဲ မဖြစ်နိုင်၊ မိုက်တီးလိုလဲ ရိုက်ချက်ကမပြင်းတော့ နီကိုရဲလိုပဲ ကောင်းကောင်းကြီး လွဲကုန်တော့တယ်။ အဲဒီတော့ တောင်ငူသားရဲ့ စာတွေဟာ သည်းခံဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကလွဲလို့ မပေါက်တော့ပါဘူး။
ဂီတလောက စကားမျိုးနဲ့ ပြောရရင် Rock ဆန်တဲ့ ဘလော့ဂ်ကို နှစ်သက်သူရှိသလို၊ Hip hop ဆန်တဲ့ ဘလော့ဂ်ကလဲ သူ့ပရိတ်သတ်နဲ့ သူပဲ၊ Punk ကလဲ အခိုင်အမာ၊ အဲဒီထဲမှာမှ တောင်ငူခေတ်က တောင်ငူသားရဲ့ လမ်းတစ်ဝက်ပေလွှာ စာပဒေသာတွေဟာ မြန်မာဘလော့ဂ် အဝန်းကြားမှာ မရွှန်းစားနိုင်ဘဲ မျက်လုံးလေး ကလယ်... ကလယ်... နဲ့ တကယ်သနားစရာ ကောင်းနေပါတယ်။ (ခုနေ ရေးရင်းနဲ့တောင် ငိုချင်လာပြီ)။ ကလောင်စွမ်း မထက်တော့လည်း အောင်နန်း မတက်ရုံသာ။ ကလောင်သွားကောင်းတဲ့ သူတွေများကျတော့လဲ ဘာပဲရေးရေး ဘာပဲတင်တင် စာမူခတွေ တစ်ထွေးကြီးပိုက် သူဌေးကြီးဂိုက် ပေါ့ဗျာ။
(ကျီစယ်ခြင်းသာဖြစ်လို့ ခွင့်လွှတ်ကြမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ပထမရေးခဲ့တဲ့ နိဂုံးသုံးကြောင်းကို သရော်စာအပေါ် နားလည်မှုလွဲနေတဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော့်ထက် ဝါကြီးတဲ့ ညီငယ်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါပြီ။ အားလုံးနားလည်ပေးနိုင်ကြပါစေ။)
Posted by Taungoo at 1:57 AM comments (15)
Posted by Taungoo at 1:00 PM comments (8)
Posted by Taungoo at 4:51 AM comments (5)
Posted by Taungoo at 1:08 PM comments (5)
Posted by Taungoo at 6:09 PM comments (6)